Ahoana ny handravahana spaghetti?
Misy ny fiheverana fa ny pasta - ity dia manimba ny endrika, ary ny fahasalamana dia tsy mitondra zavatra tsara. Fa nahoana moa izy ireo no tia any amin'ny firenena rehetra ary mandany vola be? Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny esperanto Ohatra tsy ampy amin'ny teny esperanto dia ahitana fosifa be dia be, magnesium, potassium, calcium, vitamin B sy E, ary koa proteinina fambolena sy hydrocarbon complex. Tsy hanisy ratsy anao izy ireo, tk. Tsy misy afa-tsy kalôria 80 isaky ny vokatra 100 g, raha tsy mameno azy ireo miaraka amin'ny voankazo matavy, ary mampiasa herja sy legioma mamy.
Fitsipika ankapobeny ho an'ny spaghetti
Mazava ho azy, mba hahatonga ny pasta ho matsiro ary ny zavatra manan-danja indrindra dia ny tsy ahafahanao miara-miangona dia tsy maintsy manaraka fitsipika marobe ianao amin'ny fanatsarana ny spaghetti araka ny tokony ho izy:
Mitandrema mandrakariva ny habetsaky ny spaghetti, rano ary sira 100 g isaky ny litera isaky ny 10 g.
Ny ampahany tsirairay isaky ny olona dia azo faritana amin'ny fanakatonana ny mpanefoefo sy ny ankihibe, firy ny spaghetti misy, tokony ho asa izany. Amin'ny antsalany, 100 g isaky ny olona izany.
Solim, raha vao ritra ny rano, mankany amin'ny tsoratadidy ny spaghetti.
Tsy misy rano mangatsiaka na ranom-boasary fotsiny.
Ny fotoana fikarakarana dia ao anatin'ny 7-15 minitra, fa tsara kokoa ny mamaky ny fonosana ary miova mandritra ny roa minitra, indrindra raha heverina fa tokony hatao ny sauce. Spaghetti, ilay antsoina hoe al dente, i.e. amin'ny nify, dia azo noho ny tsy fahampian-tsakafo kely ary avy eo dia mandray tsara kokoa ny saosy. Raha efa niasa izy ireo, dia tsy ampy ny hianjera, saingy tsy ho afaka handray na inona na inona izy ireo, satria dia nanangona rano be.
Ho an'ny spaghetti azo antoka fa tsy mijanona ao anaty rano mila ampiana ronono: 1 tbsp. sotro rano iray litatra.
Rehefa mikarakara sakafo dia aza manakatona ny rindrina ary aza rehefa manasa dia aza misasatra.
Indraindray dia tsy ilaina ny mandroaka ny rano rehetra, ary avelao kely mba hitondra ny saosy mankany amin'ny dity maniry.
Ahoana ny hanatsarana spaghetti ao anaty saosy?
Mazava ho azy fa tsara kokoa ny mandrehitra ny rindrina matevina sy ny ambany, ka ho toy izany koa ny hafanana eny ambonin'ny tany manontolo. Ny habeny dia tokony ho ampy tsara fa 2/3 feno raha mahandro, ka rehefa mamoaka, dia mety tsy hameno ny takelaka.
sira - 20 g.
Mametraka rano vilany eo amin'ny fatana isika, raha vantany vao mamoaka sira ary asiana spaghetti, miandry ny ampahany, misotro rano, mangatsiatsiaka ary manosika ny ambiny. Raha vao nifangaro teo ambany elanelany izy ary niompy nandritra ny 10 minitra. Mba tsy hahatonga azy ho diso dia tsara kokoa ny manandrana tsindraindray.
Ahoana ny fomba handraisana spaghetti matsiro amin'ny multifariate?
Ny hatsaran-tarehin'ity lovia ity dia ny fiomanana haingana sy tsotra, ary mbola tsy misy dipoavatra maloto.
tomato - 2 p.
Basile maitso - ½ beam;
Pusty sweet - 1 pc .;
pepper mainty, oregano, sira, siramamy.
Nataonay ny famonoam-panafody ao amin'ny multivark ary alefao ny solika mba hafanana. Manipy ny oregano sy ny tongolo lay izahay, manapaka ny takelaka, manome antsasak'adiny ara-bakiteny ara-bakiteny mba hihafana. Manaova kofehy sy voatabiha, manapatapaka kobay ao anatin'ilay menaka manitra efa maimbo sy mifangaro. Ny piper dia azo tapahina farafaharatsiny farafaharatsiny, na dia misy kibatra aza, raha ilaina. Basil koa dia manoritra ny sainao, tsy misy fepetra manokana. Ny Pepper dia mandefa voatabia ary mikolokolo mandritra ny 5 minitra, tk. Vetivety dia vita ny kitay. Ampio Basil, sira ary mani-pofana rano, mifangaro.
Azo sitranina tokoa ny spaghetti, nefa tsy hita intsony ny akanjony. Azonao atao ny manisy azy ireo ho toy ny savony ary miandry azy ireo mandra-pahatonga azy ireo ho malefaka ka hiditra tanteraka ao anaty rano. Avy eo dia afeno amin'ny takelaka iray ary andao amin'ny fomba mahavelona mandritra ny 10 minitra. Aza atao mahazatra azy ireo, fa manandrama ny hamaky azy. Tsara kokoa ny miala aloha kely ary avelao izy ireo handeha minitra vitsy. Fehezina amin'ny doka ary manitsy ny tsirony amin'ny sira sy siramamy, raha tsy mamy ny voatabia. Rehefa misakafo ianao, dia afaka mihosotra an-tampon'ny Parmesan.
Ahoana no hanamboarana taolam-paty?
Ahoana ny fomba hahandro sakafo mangatsiaka?
Sandwich mofomamy miaraka amin'ny saury
Sakafo ho an'ny lasopy sira miaraka amin'ny sausage
Ny menaka ao anaty saosy salama
Fanosorana malefaka mora foana ao an-trano
Hividy kavina ao amin'ny oven - recipe
Salama mora miaraka amin'ny akoho
Tody kisoa - recipe
Mitsangàna miaraka amin'ireo holatra
Plum ajika ho an'ny ririnina
Salady ravina misy tsimoka - sakafo mahasalama sy mahasalama ho an'ny vitaminina tsotra vitaminina
Famakiana fijerena sarimihetsika: 9 brides izay nifidy akanjo mariazy mariazy!
Ahoana ny famerenana ny metabolisma sy ny fihenam-bidy?
Ahoana no hanaovana labozia amin'ny tananao?
David Beckham dia nanome fanampiana voalohany ho an'ny vehivavy zokiolona iray any Londres
Ahoana ny fomba hahalehibe ny fantsika?
Karazan-tsakafo - varieties
Phototherapy momba ny psikology - Teknolojia
Mpandrindra ho an'ny motoblock
Jessica Alba nizara sary iray mampiaraka amin'ny zanaka lahimatoa iray
Vehivavy jiro mavomavo
Manao akanjo ho an'ny renin'ilay mpampakatra